Feno loko ny fanangonana fahavaratra 2022 an'ny Mango | Bezzia
Maria vazquez | 22/06/2022 18:00 | Inona no hotafiko
Tonga izao, efa nanomboka ny fahavaratra naniry mafy. Fotoana izao hieritreretana ny fialan-tsasatra manaraka sy hankafizana drafitra tsotra sy milamina toy ireo izay mamitaka antsika amin'izao vanim-potoana izao. Ary mba hanaovana izany, ny Mango fahavaratra 2022 fanangonana manana izay rehetra ilaintsika izy io.
Ny fanangonana vaovao avy amin'ny orinasa Catalan dia aingam-panahy avy amin'ny hakanton'ny tony fety mediteraneana. Any amin'ny morontsiraka atsimon'i Italia izay toerana ho an'ity famoahana vaovao ity izay misy loko mavomavo iray hafa.
Ny fifandanjana eo amin'ny avo sy ny mahazatra dia tonga lafatra amin'ny Together dia tsara kokoa, fanangonana vaovaon'i Mango fahavaratra 2022. Famoriam-bola misongadina amin'ny azy loko tototry sy ny dian'izy ireo mavitrika. Famoriam-bola, raha fintinina, tsy tokony ho voamarika.
1 Ireo sela
2 Ireo tolo-kevitra
Mangataka mba hanasongadinana ao amin'ny tonian-dahatsoratra vaovao ny lamba izay nampiasainy tamin'ity fanangonana vaovao ity. Lamba maharitra sy maivana, toy ny landihazo maharitra, polyester recycled ary lamba rongony ho fanampin'ny fikarakarana ny tontolo iainana, hanatrarana izany malefaka sy fampiononana izay tena tianay rehefa mamorona akanjo ho an'ny fialantsasatra.
Miaraka amin'ireo tolo-kevitra Mango vaovao dia tsy ho voamarikao ianao. Ary na dia ny akanjon'izy ireo aza dia manana hatsarana tsy manam-potoana amin'ny lafiny silhouette, ny printy sy ny loko marevaka dia manasarotra ny tsy mahatsikaritra azy ireo. tsipika na voninkazo, karazana printy inona no tianao?
Amin'ity fanangonana Mango fahavaratra 2022 ity dia mitambatra izy ireo akanjo sy lobaka vita pirinty, manompo ity farany ho palitao ho an`ny alina mifatotra amin`ny andilany. Hitanay ihany koa ny pataloha vita pirinty mitambatra miaraka amin'ny tampony voapetaka sy akanjo tsotra izay afaka miaraka aminao manomboka maraina ka hatramin'ny alina.
Ary ho an'ny alina Mango tahiry mainty sy mena. Ireo loko izay miaraka amin'ny mavo sy maitso dia toa manampy loko amin'ny fahavaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Feno loko ny fanangonana ny fahavaratra 2022 an'ny Mango
Fantatrao ve ny dikan'ny hoe manonofy saka?